Dowlada oo dooneysa in la adkeeyo in shaqo doonaha la weydiiyo diiwaanka dambiyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sawir: Adam Ihse/TT
Dowlada oo dooneysa in la adkeeyo in shaqo doonaha la weydiiyo diiwaanka dambiyada
La cusbooneeyay tisdag 2 januari kl 15.03
La daabacay tisdag 2 januari kl 10.06
Wasiirada suuqa shaqada Ylva Johansson ayaa soo bandhigtay sharci mamnuucaya in shaqaha bixiyaha uu caado ka dhigto in mar walba la weydiiyo qofka shaqo doonaha in booliska uu ka keeno diiwaanka shaqsiga ee fal dambiyeedyada.
Hase yeeshee wareysi ay wsiirada siisay idaacadda aroornimo ee P1, ayay ku sheegtay in sidoo kale ay dooneyso in ay sii ballaariso shaqooyinka ay weli muhiim u tahay in shaqo doonaha uu ka dalbado booliska diiwaanka a yaalla si loo ogaado in shaqo doonaha uu yahay qof nadiif ah oo wax dambi ugu jirin diiwaankiisa iyo in kale.
–Waxaa jira hindise ka soo baxay baaritaan la sammeeyay kaasi oo oranaya in shaqo bixiyaha keliya uu ka dalbado qofka shaqo doonka booliska diiwaanka ka yaalla, haddii uu jiro sharci sidaasi baneenaya, haddii uusan jirin waa mamnuuc in la weydiiyo shaqo doonaha diiwaankiisa booliska ka yaalla.
Wasiirada ayay la tahay in arrinka uu yahay mabda’ xaqiiqa ah. Hase yeeshee in hindisaha sidan oo kala ah loo baahan yahay in meelo badan laga eego sharci ahaan si loo aqbalo in ka badan sida uu yahay maanta waayo bay leedahay shaqo bixiyaha waa muhiim in uu helo xogta ku qotonta ama quseeysa shaqada ee laga heli karo diiwaanka shaqsiga.
Balse wasiirada ayaa leh, waaan doonayaa in la joojiyo in dabeecad laga dhigto in la ogaado xogaha kala duwan ee shaqo doonaha oo ay ka mid yihiin kuwa sumcad ahaan xasaasi ah oo aan waxba ka gelin shaqada
Ma kula soo gudboonaatay xaaladdan?